बन्जी जम्पर ३३० फीट माथिबाट हाम्फाल्ने क्रममा डोरी चुडिँदा …. (हेर्नुहोस भिडियो) « गोर्खा आवाज
काठमाडौं । साबधानी अपनाउदा अपनाउदै पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन पुग्छ । बन्जी जम्प शाहशिक खेल हो । यस्मा पनि धेरै साबधानी अपनाइन्छ तर एकजना बन्जी जम्प गर्ने क्रममा डोरी चुँडिएर भुइँमा बजारिएका छन् । घटना हो पोल्याण्डको । पोल्यान्डको गडीनियामा एकजना बन्जी जम्पर ३३० फीट माथिबाट हाम्फाल्ने क्रममा डोरी चुडिँदा भुइँमा बजारिएर करङ भाँचिएको छ ।
स्वास्थ्य ठीक भएपछि उनी हिँडडुल गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । घटना आइतवार साँझ ६ बजेतिर भएको हो । गडीनिया प्रहरीका क्रिस्टोफ कुस्मीरजिकले घटना पछि घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी र कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको बताए । घटनाको भिडियो हेर्दा उनको टाउको भुइँमा राखिएको एयरब्यागमा बजारिएको देखिन्छ ।
एयरब्यागमा बजारिएपछि उनी उफ्रिन्छन् अनि रोकिन्छन् । अनेकौं कर्मचारीहरूले उनी ठीक छन् कि छैनन् भनी हेर्न गएको देखिन्छ । स्थानीय समाचार वेबसाइट ट्रोमियास्तो डट् पीएलका अनुसार, भुइँमा बजारिए पछि उनी अचेत भए र उनलाई अस्पताल लगियो । भाग्यवश, दुर्घटनामा उनको करङ टुक्रिएको छैन र अलिकति भाँचिएको छ । उनका कहेी अन्य अंगमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ । भिडियो
तिहार के हो? किन मनाईन्छ तिहार...
केटा मान्छेले से'क्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति